I-Realme 2 Pro: Iimpawu, iiNkcukacha kunye neXabiso | Zonke iinkonzo ze-intanethi
I-Realme 2 Pro isemthethweni ngokusebenza ngokuphakathi kwebanga
I-Realme, emva kokukhutshwa kwefayile ye- Realme 2, kunye nokubhiyozela iiyunithi zezigidi zeefowuni ezithengiswa eIndiya, zisizisa isixhobo esitsha, enye ethetha ukuvela kwezinto ezibalulekileyo kwicandelo lobuchwephesha kwifowuni, xa kuthelekiswa nabandulelayo ngaphambili.
Sithetha ngeRealme 2 Pro, un phakathi kuluhlu yokusebenza ngokugqwesileyo enesinye seeprosesa ezibonisa umndilili ophakathi kuQualcomm, kunye nezinye izinto ezinomdla esingenakuphulukana nazo.
I-Realme 2 Pro ixhotywe ngesikrini esigcweleyo se-HDHD + se-2.340 x 1.080 isisombululo sepikseli, esishwankathelwe kakuhle kwifomathi yokubonisa ye-19.5: 9. Idiagonal yayo zii-intshi ze-6.3 kwaye iza nenotshi yedayi, okanye i-Waterdrop, njengoko u-Oppo eyibizile. Ukongeza, ikhuselwe yiCorning Gorilla Glass kwaye ine-screen-to-body ratio se-90.8%.
Ifowuni ineprosesa ye-octa-core Snapdragon 660Iyonke, inkumbulo ye-RAM eyi-2.2, 4 okanye i-6 GB yamandla ngesandla kunye ne-8 okanye i-64 GB yendawo yokugcina yangaphakathi -yandiswa nge-microSD- yiyo le nto iselfowuni isebenzisa . Ukongeza, ibhetri ye-128 mAh inoxanduva lokugcina yonke into isebenza.
Kwicandelo lokufota, I-Realme 2 Pro ineqhayiya nge-398 kunye ne-16Mp ye-Sony IMX2 yekhamera yangasemva enef / 1.7 yokuvula, Dual Pixel kunye ne-EIS. Ngaphambili, i-16MP f / 2.0 resolution resolution yinto onayo yokuthatha iiselfie, iifowuni zevidiyo kunye nokuvula ubuso, kunye ne-AI yokuphucula ifoto.
Ngakolunye uhlangothi, iqhuba i-Android 8.1 Oreo njengenkqubo yokusebenza phantsi kweColorOS 5.2, ineminwe yokufunda ngasemva, inkxaso ye-SIM emibini, i-4G VoLTE, i-WiFi ac, iBluetooth, i-GPS, i-USB OTG kunye ne-3,5mm jack audio.
Ifowuni iza kuthengiswa eIndiya ukusuka nge-11 ka-Okthobha ngemibala emithathu onokukhetha kuyo: uLwandle oluBlue, uLwandle oluMnyama kunye neLake Ice. Ixabiso lalo liyahluka ngokokuqwalaselwa kwe-RAM kunye neROM:
I-Realme 2 Pro 4 GB ye-RAM + i-64 GB yokugcina: I-13.990 rupees (ejikeleze i-euro ezingama-165 kwizinga lotshintshiselwano).
I-Realme 2 Pro 6 GB ye-RAM + i-64 GB yokugcina: I-15.990 rupees (ejikeleze i-euro ezingama-188 kwizinga lotshintshiselwano).
I-Realme 2 Pro 8GB RAM + 128GB yokugcina: Ii-rupie ezingama-17.990 (ezijikeleze i-euro ezingama-212 ngexabiso lokutshintshiselana).
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » I-Realme 2 Pro isemthethweni ngokusebenza ngokuphakathi kwebanga
Ukuhlawulwa kwefowuni ngeWhatsApp kungekudala kuza kufika eSpain
Yile nto iRazer Phone 2 iya kujongeka ngayo